निजामती र त्रिवि सेवा आयोग बिच समन्वयको अभावः लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल « Rara Pati
निजामती र त्रिवि सेवा आयोग बिच समन्वयको अभावः लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योल
देशका गहना, राज्यका अमुल्य सम्पत्ति राज्यको हित हुने कार्य गर्ने र राज्यद्वारा सञ्चालित जनशक्ति नै निजामती कर्मचारी हुन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्न्नाले (प्राज्ञिक सेवा) शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशिल जनशक्ति भन्ने बुझिन्छ । यी दुबैमा जागिर खानु सबैको सपना हुन्छ । त्यही सपनालाई सकार गर्नको लागि हरेक युवाले आफ्नो रहरहरू लाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नो र बा–आमाको सपना पूरा गर्नको लागि दिनरात नभनी साहु महाजनबाट ॠण काटेर, बा–आमालाई वचन दिएर सक्षम कर्मचारी बन्ने सपना बुनेर शहर पसेको हुन्छ ।
उसले यो सुनेको हुन्छ कि त्यहाँ न कसैको बोली चल्छ न सोर्स फोर्स नै यहाँ त केबल जसले पढ्न सक्छ । त्यसैले नेपालको कर्मचारी भन्ने त्यही मनसाय बोकि सहर पसेर छिडिमुनिको अँध्यारो कोठामा दिन भरी बाहिर न निस्किएरै सपना पूरा गर्न लागि पढिरहेको हुन्छ । ब्याज खोजेर ल्याएको पैसा हुने बेलासम्म निजामती सेवा र त्रि.वि. सेवा आयोगको लागि तयारी गर्छु अनि आउने बिज्ञापनमा नाम निस्किने गरि पढ्छु भनेर लागेको हुन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यायको परीक्षा र निजामती सेवा अन्तर्गत कानुन संकायको परीक्षा एकै दिन एउटै समयमा जुध्नुले विद्यार्थीहरूको सपनामा आगो लागेको छ । त्रि.वि. तयारी गरिरहेका कति विद्यार्थीहरूले कानुन अफिसर पनि तयार गरिरहेका हुन सक्छ्न् । दुबै परीक्षा एकै दिन हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आयोग बीचमा समन्वयको कमि, व्यवहारिक ज्ञानको कमि पक्कै भएको देखिन्छ ।
यसै बिचमा भएको कोरानाको तरङ्गले उसलाई राजधानीको ठाउँमा बाँच्न गार्हो परिरहेको हुन्छ । घर पनि नगएर सपना पूरा गर्न रातदिन नभनी लागेका लाखौं बिद्यार्थीहरूको अघि बढ्ने बाटो कोरनाका कारण अन्योलमा परेको थियो नै । जब अल्लि सहज बाताबरण भएपछि आयोगले परिक्षा लिने निर्णय गरेपछि अधिकाँश विद्यार्थीहरूको खुशीको सिमा रहेन तर त्यो खुशी धेरै दिन रहन सकेन । त्रिभुवन विश्वविद्यायको परीक्षा र निजामती सेवा अन्तर्गत कानुन संकायको परीक्षा एकै दिन एउटै समयमा जुध्नुले विद्यार्थीहरूको सपनामा आगो लागेको छ । त्रि.वि. तयारी गरिरहेका कति विद्यार्थीहरूले कानुन अफिसर पनि तयार गरिरहेका हुन सक्छ्न् । दुबै परीक्षा एकै दिन हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आयोग बीचमा समन्वयको कमि, व्यवहारिक ज्ञानको कमि पक्कै भएको देखिन्छ ।
लोकसेवा आयोगले क्षेत्रियता कायम गरेकाले परीक्षा दिन जान आउनलाई यातायातमा भाडामा हुने मनोमानीले पनि मर्कामा परेका छन । एक किसिमको दिक्कता देखिन्छ । कतिपय विद्यार्थीहरूको पढाई पुगेको तर उमेरको अन्तिम बर्षमा दौडिरहेका भबिस्यका मुनाहरूको मनोभावना माथी आयोगले ठेस पुर्याएको छ । यसको बिकल्प खोजिनुपर्छ, विद्यार्थीलाई दुबै तिर परीक्षा दिने वाताबरण सिर्जना गरिदिनु पर्ने देखिन्छ । हजार सपना बोकि निजामती सेवा र प्राज्ञिक क्षेत्रमा जीवन खोजिरहेका युवाहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरिदिनु पर्ने उनीहरूलाई सहज रूपमा परीक्षा दिने वातावरण मिलाईदिनु पर्ने जरुरी छ ।
कतिपय विद्यार्थीहरूको पढाई पुगेको तर उमेरको अन्तिम बर्षमा दौडिरहेका भबिस्यका मुनाहरूको मनोभावना माथी आयोगले ठेस पुर्याएको छ । यसको बिकल्प खोजिनुपर्छ, विद्यार्थीलाई दुबै तिर परीक्षा दिने वाताबरण सिर्जना गरिदिनु पर्ने देखिन्छ । हजार सपना बोकि निजामती सेवा र प्राज्ञिक क्षेत्रमा जीवन खोजिरहेका युवाहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरिदिनु पर्ने उनीहरूलाई सहज रूपमा परीक्षा दिने वातावरण मिलाईदिनु पर्ने जरुरी छ ।
आ-आफ्नो बार्षिक तालिकामा असर नपर्ने गरी काम सक्काउन खोज्नुभन्दा पनि विद्यार्थीहरूको हकहित हुने भबिष्यका कर्णधारलाई माथी उठाउनु पर्ने र ऐन नियम अनुसार आफ्नालाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । यदि यस्तो गर्न नसकेको खण्डमा विद्यार्थीहरूले दुबै तिरको अबसरहरू गुमाउने निश्चित छ । पछि जब अवसर पाउँछन् अनि त्यही सहिकडमा ल्याएर आयको बिद्यार्थी जीवनको ॠण तिर्न को लागि सावाँ, ब्याज, निस्किने गरि सेवा आयोगको बदनाम हुने गरि भ्रस्टाचार गर्छन किनकी उनिहरूको मनसाय चोर बन्ने हुँदैन परिस्थिति अनुसार बन्ने गर्दछ्न् । सेवामा लाग्नेभन्दा पनि कसरी कमाउने भन्ने भावना बढी हुने देखिन्छ । त्यसैले सबै कुराको बाबजुत हर परिस्थिति लाई मिलाएर आफू अगि बढनु जरुरी देखिन्छ ।